Momba anay - Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd.
Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd. naorina tamin'ny taona 1996, satria orinasan-tserasera kely iray manana renivohitra RMB 500,000, faritra rihana 16,3 mu ary mpiasa vitsivitsy ihany no nanombohany. Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana fandriana mpitsabo, kojakoja ara-pitsaboana, kojakoja fitsaboana mena ary ny vokatra sédiosialy hafa, miaraka amina renivola RMB 120 tapitrisa, faritra misy rihana 180 mu, faritra fananganana 92,000 metatra toradroa, mihoatra ny mpiasa 580 famoarana isan-taona ny 200000 unit (sombiny).
Ny orinasa dia nandany ny fanamarinana rafitra kalitao ISO 9001, fanamarinana rafitra momba ny kalitao ISO 13485, fanamarinana ny CE CE, fanamarinana Amerikana FDA, fanamarinana rafitra ara-tontolo iainana ISO 14001, fanamarinana rafitra ara-pahasalamana momba ny fahasalamana sy fiarovana ara-pahasalamana, OHSAS 18001, miasa ho mpamatsy fitaovam-pitsaboana an'ny Firenena Mikambana. ary ny mpamatsy voatondro voatondro ho an'i Chine ho an'ny fanamaivanana ny fahantrana sy fitaovana fitsaboana ara-pahasalamana ara-pahasalamana. Ny marika «Little Nurse» dia nomena anarana hoe "Hebei Famous Trademark" ary ny vokatra dia nantsoina hoe "Hebei Famous Brand Product", nahazo mari-boninahitra 30 mahery nomen'ny departemantam-pirenena, faritany, monisipaly ary departemanta hafa.
Ny orinasa amin'izao fotoana izao dia manana fitaovam-pamokarana matihanina mandroso, toy ny milina famotongana laser avy any Alemaina, foibe fanodinana mankarary sy fikosoham-bary (Etazonia), lasantsy robot izay avy any Japon, milina fanenona laser, milina fanoratana sary (fiaraha-miasa miaraka amin'i Sino-US) sy ny sisa mivoaka.
Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia mirehareha ekipa teknika matihanina momba ny milina, elektronika, famolavolana endrika, sns, R&D tsy miankina amin'ny vokatra fikarakarana ara-pahasalamana sy fahaizana feno hanomezana hopitaly amin'ny ambaratonga rehetra. Nahatratra mihoatra ny 100 paty ny orinasa, nitana andraikitra lehibe teo amin'ny indostria manerantany, nomena ny anaram-boninahitra ny "Centre technique" proviziona, "Enterprise teknolojia" faritany, "SME scientifique sy teknolojia", ary nitazona maharitra fifanakalozana fifanakalozana ara-teknika, fifaneraserana ataon'ny olona ary fiaraha-miasa hafa miaraka amin'ny Tianjin University, ary koa ny Technology Technology sy Business University. Tamin'ny taona 2017, nanao sonia fifanarahana fiaraha-miasa stratejika miaraka amin'ny Beijing Aerospace Long March Launch Vehicle Technology Co., Ltd ny orinasa, ary manamarika dingana iray mahomby sy hentitra hamoronana miaraka amin'ny sivilizasiana ara-pitsaboana ny teknolojia aerospace.
Hatramin'ny voalohanyMpitsabo kely"Natokana fantsom-panafody multifunctional maro dia natomboka tamin'ny 1997, ny orinasa dia nanao fanarenana ny vokatra hatramin'ny taranaka fito, nahazo mari-pankasitrahana marobe, niaraka tamin'ny fisian'ny orinasa tany amin'ny firenena sy faritra 100 mahery tany Eropa, Azia, Afrika ary Amerika, ary nanorina fifandraisana maharitra maharitra amin'ny Toeram-pitsaboana an-jatony-sokajy an-jatony manerana ny firenena. Mandritra izany fotoana izany, ho an'ny mpanjifa tsara ny serivisy, dia nanangana birao sy toeram-pivarotana fivarotana ny varotra any amin'ny faritany Shinoa 20 mahery.
Ny orinasa dia hifanaraka amin'ny fanadinoana ireo vokatra ara-pitsaboana mahafinaritra ho toy ny adidiny, fiarovana ny fahasalamana amin'ny maha-iraka azy, ary hanangana orinasa ivato ho tanjona, hanamafisana ny fahavitrihana ao amin'ny orinasa ary hitondra ny herintsika amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny fitaovana medika mifototra amin'ny mekanika fitantanana siantifika sy mahomby. .